Haweeney xaamilo aheyd oo lagu dilay MUQDISHO |
Haweeney xaamilo aheyd oo lagu dilay MUQDISHO
Muqdisho(GNN):-Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dil xalay haweeney uur laheyd loogu geystay qeybo ka mid ah degmada Wadajir ee gobolka Banaadir, dilkaas oo ay fuliyeen rag burcad ah oo ku hubeysnaa bistoolado.
Dilka ayaa ka dhacay agagaarka isgoyska Korontada, waxaana la sheegay in haweeneyda ay ka dhaga adeegtay inay raggaasi u furto Dahab ay xirneyd, kadibna ay toogteen, iyagoona ka qaatay Dahabkii iyo Mobile ay wadatay, sida ay Caasimada Online u xaqiijiyeen ilo deegaanka ah.
Ehellada haweeneydaaasi ayaa lagu soo warramayaa in markii dambe ay meydka ka soo qaadeen halkaasi, sidoo kale waxaa goobta gaaray ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo baaritaano kooban ka sameeyey halkaasi.
Wararka ayaa sheegaya in ragga dilka geystay oo ahaa labo nin mid ka mid ah gacanta lagu soo dhigay, halka kan kalena ay weli ku raadjoogaan ciidanka ammaanka.
Ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay maamulka degmada Wadajir oo ku aadan dhacdadaasi oo argagax ku reebtay dadka deegaanka.
Muddooyinkii dambe waxaa degmooyinkii Wadajir iyo Dharkenley ka dilaacay burcad dhibaato ku heysa shacabka demooyinkaasi, waxaana la sheegay in kooxahaan oo qaati laga taagan yahay ay habeen iyo maalin ay dhac ka geystaan xaafadahaasi.